In ka badan Boqol ruux oo baxsad ka ah dagaalka ka socda Ukraine oo u tallaabay Xadka Poland. – XAMAR POST
By Mohamed Abdi On Feb 26, 2022
Tiro dad ah oo si xawli ah usii kordhaya ayaa ka cararaya dagaalka ka socda Ukraine ku dhawaad 100,000 oo qof ayaa durba u tallaabay Poland tan iyo markii uu billowday duullaanka Ruushka , ayay tiri hay’adda ilaalada xuduudaha ee Poland.
“Dhaqdhaqaaqa qaxootigu wuu sii kordhayaa,” ayay tiri afhayeenad Anna Michalska, iyadoo In ka badan 20,000 oo qof ayaa yimid ilaa 06:00 GMT Sabtidii, ayay tidhi.
Dowladda Poland ayaa ballan qaaday in ay qaabili doonto cid kasta oo ka baxsaneysa dagaalka Ukraine, ayna siin doonto hoy ku meel gaar ah kuwa aan haysan meel ay aadaan.
Poland ayaa dadka u ogolaanaysa inay si lug ah uga gudbaan xadka sideeda goobood ee laga gudbo, iyadoo safafka baabuurta ay ku soo badanayaan isbaarooyinka xuduudaha. Markii hore, dadka lugeynaya ayaa loo oggolaaday inay ka gudbaan hal dhibic oo Medyka ah.
Sagaal xarumood oo qaabilaad ah – halkaas oo dadka imanaya ay ka heli karaan cunto, gargaar caafimaad iyo macluumaad – ayaa laga dhisay iskuulada iyo jimicsiga u dhow isgoysyada xuduudaha, iyo sidoo kale mid ku yaal saldhigga tareenka ee Przemysl.
Ciidamada Ruushka oo gudaha Caasimada Ukraine ka dhex dagaalamaya + Khasaaraha.